Ciidamada Maamulka Jubbaland Oo Lagu Weeraray Jubbada Hoose. – Bogga Calamada.com
Ciidamada Maamulka Jubbaland Oo Lagu Weeraray Jubbada Hoose.
Dagaalyahannada xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab waxay weeraro saf ah ku qaadeen saldhigyo ciidan oo kuyaal koonfurta dalka Soomaaliya waxaana saldhigyadan lagu weeraray maleeshiyaadka Soomaalida ee dabadhilifyada u ah shisheeyaha dalka kusoo duulay.
Weerarka hore oo ahaa mid culus waxa uu ka dhacay saldhigga ciidamada dowladda ay ka samaysteen degmada Afmadow ee wilaayada Jubbooyinka waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada shabaabul Mujaahidiin iyo maleeshiyaadka maamulka Jubbaland.
Ilo wareedyo muhiim ah waxay xaqijiyeen in weerarkaas khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka maamulka uu hoggaamiyo Axmed Madoobe wallow aan faahfaahin dheeri ah laga helin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha nafeed iyo midka hantiyeed ee maleeshiyaadka Ridada ku gaaray dagaalka.
Sidoo kale waxay ciidamada Mujaahidiintu weerareen saldhigga ciidamada maamul goboleedka ashahaada la dirirka ee Jubbaland ay ka samaysteen deegaanka Jaziiradda kudhaa oo ka mid ah deegaannada dhaca jaziiradaha wilaayada Jubbooyinka.
Deryanka madaafiicda iyo hugunka rassaasta dagaalka la isku adeegsanayay waxaa si aada looga maqlayay deegaammo fog fog oo u dhow Jaziiradda Kudhaa waxaana jira khasaare xooggan oo maleeshiyaadka lagu dhaxalsiiyay weerarkii Jaziiradda Kudhaa.